सम्पूर्ण क्षेत्रको पेमेन्ट मोवाइल बैंकिङबाट कसरी गर्ने ? (मोवाइल पेमेन्टबारे जानकारी) – Banking Khabar
सम्पूर्ण क्षेत्रको पेमेन्ट मोवाइल बैंकिङबाट कसरी गर्ने ? (मोवाइल पेमेन्टबारे जानकारी)
बैंकिङ खबर / तपाईँलाई थाहा छ, विजुली, पानी, स्कुल, टेलिफोन लगायतको बिल मोबाइलबाटै चुक्ता गर्न सकिन्छ । नेपालमा यो सिस्टम भर्खरै सुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा आईएमई पे, प्रभु टेक्नोलोजी र इसेवा फोन पेले यो सेवा सुरु गरेका हुन् । आईएमई र ईसेवाले पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर(पीएसपी)को र प्रभु टेक्नोलोजीले पेमेन्ट सर्भिस अपरेटर (पीएसओ) को अनुमति पाएका छन् । भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली २०७२ को विनियम १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकबाट जारी शर्त तथा निर्देशनको अधीनमा रही दुरसञ्चार सञ्जालको माध्यमबाट डिजिटल वालेट (ग्राहक र सेवाप्रदायकको बीचमा मध्यस्तता गरी भुक्तानी गरिदिने र स्वदेशमा गरिने मनि ट्रान्स्फर गर्ने) कार्य गर्न भुक्तानी तथा फछर्यौट अनुमति नीति–०७३ बमोजिम अनुमति पाएका कम्पनीहरुले मोबाइल वालेटको कारोबार गर्नेछन् ।
मोबाइल मनीको अवधारणा सबैभन्दा पहिला केन्यामा प्रयोग भएको थियो । सन् २००७ को मार्च महीनामा बेलायती दूरसञ्चार कम्पनी भोडाफोनको केन्याली सहायक कम्पनी सपारीकमले त्यहाँ एम–पेसा सेवा लञ्च गरेको थियो । सफारीकमले एक दशकअघि शुरूमा प्रयोगकर्ताहरूबीच ससानो रकम भुक्तानीका लागि मात्रै यो सेवा शुरू गरेको थियो । तर पछि यसमा फाइनान्सिङ र माइक्रोफाइनान्सिङको सुविधा पनि दिइयो । हाल यो सेवामा सीमापार रकम स्थानान्तरण, कर्जा र स्वास्थ्य प्रावधान समेत समाविष्ट छ । अहिले यो सेवा करीब ८० प्रतिशत केन्यालीहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २५ प्रतिशतभन्दा बढी यही सेवामार्फत प्रवाह हुने गरेको छ । केन्यापछि अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रिका, भारत हुँदै हाल विश्वका थुप्रै मुलुकहरुमा मोबाइल मनी विस्तार भइसकेको छ ।